သတင်းလွှာအမှတ် ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ နွေ ဦး ရာသီ - The Reward Foundation
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းလွှာအမှတ်9နွေ ဦး 2020
သတင်းလွှာအမှတ်9နွေ ဦး 2020
နွေ ဦး မှကြိုဆိုပါ၏ မင်းတို့ဟာလှပတဲ့ရာသီဥတုကိုခံစားနေရပြီးဒီနွေ ဦး ရာသီမှာငါတို့အားလုံးဟာထူးဆန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လုံခြုံပါ။
The Reward Foundation မှကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုင်ယာရီအတွင်းမှကွာဟချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ ဤ belletletter newsletter အပါအ ၀ င်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ဟမ်! လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့အားအလုပ်များစေခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုအောက်ပါနေရာများတွင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများတင်ဆက်ခြင်း၊ သုတေသနအသစ်လေ့လာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုသုတေသနစာတမ်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျောင်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်၏မဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲခြင်း။ ပျော်စရာ၊
သတင်းမီးမောင်းထိုးပြမှုများအပြင်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်လွဲချော်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်မှဘလော့ဂ်အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာစာရင်း၏အဓိကစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဘလော့ဂ်များ.
ဤအချိန်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အားလပ်ချိန်နှင့်တေးသွားများကိုအခမဲ့အချိန်ဖြုန်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒီတော့ချိန်ခွင်လျှာကိုနည်းနည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပြန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ငါတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုအကောင်းမြင်စေဖို့တည်ဆောက်ပုံနည်းနည်းလေးရှိပါတယ်။
“ မင်းကိုငါ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးအသက်ရှူ၊ အပြုံးတွေ၊ မျက်ရည်တွေနဲ့မင်းကိုချစ်တယ်!” အဲလစ်ဇဘက် Browning အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတာတစ်ခုပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းပဲ။ ” Euripides က
“ ရင့်ကျက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက 'မင်းကိုငါလိုအပ်တာကြောင့်ငါမင်းကိုချစ်တယ်' လို့ပြောတယ်။ ရင့်ကျက်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာက 'မင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်ငါမင်းကိုလိုအပ်တယ်' လို့ပြောတယ်။ “ အီး Fromm ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Breနွေ ဦး ရာသီ 2020 အဘို့အသတင်း aking
မိဘများအတွက်မိဘများအတွက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အသစ် Porn သည်ကလေးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်း
ကျေးဇူးပြုပြီး Vimeo ကိုစာရင်းသွင်းပါ နောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်ပါ နယူးဇီလန်ရှိမိဘများကပြုလုပ်သောဤအသစ်သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက်။ အမေသည်စကော့လူမျိုးဖြစ်သည်။
နောက်တွဲယာဉ်ကအခမဲ့ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နောက်ခံဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတာဒေါ်လာအနည်းငယ်သာရှိတယ်။ Rob နှင့် Zareen တို့သည်၎င်းကိုသူတို့၏စွမ်းရည်နှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်မှုကို အသုံးပြု၍ စီးပွါးရေးအသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါက ကျေးဇူးပြု၍ ၀ ယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘီဘီစီစကော့တလန် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းမှုကိုး
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကဘီဘီစီစကော့တလန်စကော့တလန် Nine သည်နယူးဇီလန်၌ဂရေ့စ်မီလီလန်သေဆုံးပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပွောငျးအလဲဖြစ်ပွားမှုများပြားလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ TRF မှ Mary Sharpe နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ။
The Rine ဆုဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကChair္ဌနှင့်စာနယ်ဇင်းသမား Jenny Constable Mary Sharpe တို့သည် The Nine စတူဒီယိုအိမ်ရှင်များနှင့်အတူ Martin Geissler နှင့် ရေဗက္ကာ Curran
ဒီဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဟာအထီးကျန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ The Sunday Times မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်စစ်တမ်းအရအသက် ၂၂ နှစ်အောက် (၂၃ နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သော) အမျိုးသမီးငယ်များအနက်နှစ်ဆပိုများသောလိင်နှင့် BDSM (အနှောင်အဖွဲ့၊ ကြီးစိုးမှု၊ ဆွစ်ဇာလန်ဘာသာနှင့် masochism) ကိုယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့နှစ်သက်သောအပြာပုံစံများအဖြစ်ရွေးချယ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းကို BDSM ပုံစံ၏စစ်မှန်သောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိ၊ မရှိကိုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိစ္စများတွင်တရားရုံးများအတွက်ကြီးမားသောပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဘဲလ်ဖတ်အနီးအနားရှိလစ္စဘွန်းမြို့ရှိ Valentine's Day ၌ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောနွေးထွေးသော reception ည့်ခံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရက်သတ္တပတ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစွာဝင်ရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ပ်တို့သည်အထွေထွေမိသားစုဆရာဝန်များစွာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်လူငယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုသတိမပြုမိကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်းမှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းရှိလစ္စဘွန်းရှိ Lagan Valley Civic Center တွင် TRF ။
ဒါဟာအချိန်ယူဖို့သင့်ရဲ့အချိန်ကိုတကယ်ကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ် နားထောင်ပြီးသင်ယူပါ စိတ်ပညာ၏ဤနှစ်ခုပါမောက္ခကနေ။ မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ Kent Berridge နှင့်ယူကေရှိပွင့်လင်းတက္ကသိုလ်မှဖရက်ဒရစ်တိုတက်စ်တို့သည်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကလှုံ့ဆျောမှု, ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုမောင်း? ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်လူငယ်များမည်သို့စွဲလမ်းနေပုံကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်၌၎င်းတို့အားကျန်းမာသောဘဝများရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ပါမောက္ခ Kent Berridge နှင့်ဖရက်ဒရစ် Toates
၁၇ ရက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်လုံးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်th သော့ခတ်ကိုင်ယူမီ Kilmarnock အတွက်မတ်လ။ ဘာသာရပ်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှု” ဖြစ်သည်။
ဤကောင်စီနှင့်အစောပိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှထွက်ပေါ်လာသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာလိင်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုစွဲဆိုသူများအားတရား ၀ င်အာဏာပိုင်များကကွဲပြားစွာဆက်ဆံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကွဲပြားသောစွန့်စားမှုဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်းများကိုမည်သို့ ဦး တည်စေနိုင်သည်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးလုပ်သားများသည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြား ၀ င်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဤကောင်စီနှင့်အတူတဖန်အလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Reward Foundation သည်အဖွဲ့အစည်းများ၏စုပေါင်းအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Age Verification ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ယူကေအစိုးရအားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေသည်။ ဤဗီဒီယိုကိုကလေးများ၊ မိဘများ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမတ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသြဇာသက်ရောက်သူများစွာထံသို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုထောက်ပံ့ရန်ပေးပို့နိုင်သည်။. ဒီမှာရှာပါ: https://ageverification.org.uk/
နွေ ဦး ဘလော့ဂ်များ
“ ထုပ်” ခြင်း ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည် livestreaming လုပ်နေစဉ်အတွင်းမသင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်ကလေးများကိုလှည့်စားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကလေး၏ဗဟုသုတမပါဘဲမသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုပုံများသို့မဟုတ်အသံသွင်းခြင်းများကို“ ဖမ်းဆီးရမိသည်။ သူတို့ကနောက်ပိုင်းတွင်သားကောင် extort သို့မဟုတ် sextort ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ Pedophiles နှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သူများသည်ကလေးများအပေါ်လုံးဝစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောသူများသည်အလွန်ပင်ပြင်းထန်သော cappers များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကငွေ (သို့) ကုန်ပစ္စည်းရဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာနေတာပဲ။ ယင်းသို့သောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိသောကလေးများအတွက်အလွန်စိတ်သောကရောက်နိုင်ပါသည်။
Big Porn သည် Pandemic ကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်
"အကျပ်အတည်းကာလမှာ, အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း သေးပိုပြီးလူ့စိတ်ကထပ်ပြောသည်။ Pornhub သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာများကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများသည်တဟုန်ထိုးများပြားလာသည်။
"1980 ခုနှစ်ရုပ်ရှင်၌ လေယာဉ်ပျံ!, လေယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်သူစတိဗ်မက်ကရိုစီကီသည်အစားအစာအဆိပ်သင့်မှုကြောင့်ဘေးကင်းရာသို့ထွက်ခွာသွားသည့်လေယာဉ်ကိုလမ်းပြရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ သူက“ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ရက်သတ္တပတ်မှားနေပြီထင်တယ် နောက်ပိုင်းတွင်သူက "အမ်ဖီတမင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း" မှားသည့်သီတင်းပတ်သည်နောက်တဖန် ထပ်မံ၍“ နံ့သာပေါင်းကော်ကိုနုတ်ပစ်ရန်မှားယွင်းသောအပတ်” ကိုလည်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
မိဘများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးများအားအွန်လိုင်းထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အစိုးရများအနေဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏမေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင် WePROTECT ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာမိတ်များအပါအ ၀ င်အရေးအကြီးဆုံးကစားသမားအချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ Global Alliance နှင့်“ Five Eyes” အဖွဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
သဘောတူထားသည့် sexting သည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်သော်လည်း coxtive sexting သည်တော်တော်များများဖြစ်နေကြောင်းသိရသောအခါမိဘများထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားနိုင်သည်။ သုတေသနပြုချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဤ blog sexting နှင့်ဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် The Guardian သတင်းစာမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးလည်းရှိသည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအိမ်တွင်အူကြောင်ကြောင်ထားခြင်းဖြင့်အင်တာနက်ကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သောကလေးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသောပျော်စရာဟုထင်ရသော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အချိန်တန်လျှင်ပြလိမ့်မည်။ သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကလေးများအားမည်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလေ့လာနိုင်သည်။ ဒါဟာအတိတ်၏ porn ကဲ့သို့အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ငါတို့ကြည့်ပါ အခမဲ့အင်တာနက်မိဘများလမ်းညွှန် ဗီဒီယိုများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ စာအုပ်များနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းခက်ခဲသောစကားဝိုင်းများကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ Twitter @brain_love_sex ရှိဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလိုက်နာပါ။ ဒီနေရာတွင်ဤနယ်ပယ်ရှိသုတေသနအသစ်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သတ်သောပုံမှန်သတင်းများကိုသူတို့ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသင်တွေ့လိမ့်မည်။